Manolotra ny andiam-panovozan’i “Whose Knowledge?” Manampy ny fahalalànay amin’ny Wikipedia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2019 5:29 GMT
Fandravahana avy amin'i Whose Knowledge? nanaovana lisansa CC BY-NC-SA 4.0
Ity no endrika iray avy amin'ny lahatsoratra ôrizinaly navoaka tao amin'ny bilaogy Whose Knowledge? ary navoaka teto indray noho ny fiaraha-miasa amin'i Whose Knowledge? ary vonona ihany koa araka ny lisansa CC BY-SA 4.0
Nahoana izahay no miasa amin'ny Wikipedia, ary inona ny fanalana entinay amin'ny fombam-panjanahantany amin'ilay raki-pahalalàna antserasera?
Faly i Whose Knowledge? manolotra ny “Manovana ny fahalalanay amin'i Wikipedia”, Andiany fahatelo ao amin'ny andiam-panovozana “Tantaranay, fahalalànay”; iarahan'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Vazimba Amerikana avy ao Kumeyaay sy Shoshone, vondrom-piarahamonina feminista Dalit avy ao India sy any ampielezana, vondrom-piarahamonina LGBTIQA avy ao Bosnia Herzegovina, ary ireo mpiara-dia amin'i Whose Knowledge? manoratra.
Tendreo raha hitroka ny fitaovana PDF
Andiany fahatelo: Manovana ny fahalalànay amin'ny Wikipedia
Ity fitaovana ity no mizara ny antony nanapahanay hevitra hanangana sy hizara ny fahalalanay ao amin'ny Wikipedia, sy ny fomba hanaovanay ity asa ity. Manana tantara isan-karazany hozaraina izahay momba ny fomba nanitsianay ity rakipahalalàna lehibe indrindra sy maimaim-poana manerantany ity. Maro amin'ny zava-niainanay no nahafaly saingy maro tamin'izy ireny ihany koa no nitondrana takaitra. Nampiaina indray ny rafi-pamoretana efa natambesatra taminay sy ny vondrom-piarahamoninay teo amin'ny fiainanay andavanandro ny nifampitana sy ny nifanaraka tamin'ny fitsipika napetraky ny Wikipedia amin'ny fahamendrehana sy ny fametrahana loharanom-baovao azo antoka.
Tendreo ny sary na eto raha hitroka ny loharanom-baovao endrika PDF
Amin'ny fizaràna izay nianaranay tamin'ny fanovanana ny fahalalànay tamin'ny Wikipedia, manantena izahay fa hampiasa ny traikefanay ho toeram-pakàna vahana hanavatsavanao ny lalana ny vondrom-piarahamonina hafa natao anjorom-bala – tafiditra amin'izany ny vehivavy, ny tsy fotsy hoditra, ny vondrom-piarahamonina LGBTQIA, ny vahoaka vazimba ary ireo hafa avy amin'ny ilabolantany atsimo. Ny tanjonay dia ny handrisika ny taranaka manaraka mpanamarika ny fahalalàna hanohy ny as amafy nefa ilaina mba hanalana ny fahalalàm-panjanahantany ao amin'ny Wikipedia. Kendrenay ihany koa ny hanamafisana ny tambajotra anananay amin'ireo Wikipediana mpiara-dia, ary hanabe sy handrisika mpiara-dia vaovao hanohana sy hanatevin-daharana anay amin'ny fampidirana ho eo afovoany ny fahalalàna avy eny amin'ny sisiny.